ဒီနေ့ မနက် စောစောစီးစီးအရေးပေါ်ခန်းက ဖုံးဆက်ခေါ်တာနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အိပ်ချင်မူးတူး ကမန်းကတန်း အောက်ပြေးဆင်းပေ့ါ။မျက်နှာတောင်မသစ်အားဘုး ။ဒါပေမဲ့သိပ်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူး ။ မျက်နှာအုပ်တဲ့mask တပ်ထားကြတာဘဲ ။ဘယ်သူသိတာမှတ်လို့ ။
အရေးပေါ်ခန်းထဲရောက်တော့ ၅နှစ်-၆နှစ်သားအရွယ်ခလေးတယောက်အော်ငိုလို့ ပေါ့ ၊သူ့ ရဲ့ ညာဖက်လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့့လက်ဖမိုးလေးပေါ်မှာ သွေးယိုကျနေတဲ့ပေါက်ပြဲရာတွေနဲ့ ။လူနာအမေကို လိုအပ်တဲ့ အချက်တွေကမန်းကတန်းမေး ၊ ဒါဏ်ရာကို ချုပ်ဖို့ လိုအပ်လားဆိုတာ စစ်ဆေးပေါ့။ အများအားဖြင့်အဲသလိုမျိုး ခွေးတို့ ကြောင်တို့ ကိုက်တဲ့ ဒါဏ်ရာတွေကို မချုပ်ရဘူး ။ အဲဒီ တိရစ္ဆာန်ကိုက်ရင် သူတို့ ရဲ့တံတွေးမှပိုးတွေကြောင့် အနာ ရင်းတတ်လို့ပါဘဲ ။တကယ်လို့ဒါဏ်ရာ သိပ်ပြီး မကြီးရင် ၊မနက်ရင် ဒီဒါဏ်ရာကို စင်အောင် သန့် အောင်ဆေးကြောပြီး ဆေးထည့်( cleaning and dressing) လုပ်ပေးရုံပါဘဲ ။ တကယ်လို့ ဒါဏ်ရာသိပ်ကြီးရင် ။ဒါမှမဟုတ် အရေပြားအောက်ထိမှ အရွတ် ။အကြော ။အသားမျှင် ။အရိုး စသဖြင့်မြင်ရလောက်အောင်ကြီးမားနေရင်တော့ ဒီအနာကို မချုပ်လို့ မရပါဘူး ။ဒါပေမဲ့ချုပ်ရိုးကို သိပ်ပြီးစိပ်နေအောင် မချုပ်ရဘူး ။အနာရင်းပြီးယောင်လာရင် အထဲက မကောင်းတဲ့သွေးပုပ်တို့သားငံရည်တို့စိမ့်ထွက်နိုင်အောင်လို့ခပ်ကျဲကျဲလေးဘဲ ချုပ်ရတယ်လေ။
ဒီခလေးရဲ့ဒါဏ်ရာလေးတခုက နဲနဲလေး နက်နေလို့ချုပ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ။ဒီတော့ဒါဏ်ရာကို မချုပ်မီ သေချာ သန့် စင်ဆေးကြောပေးပြီး ထုံဆေးထိုးရတော့တာပေါ့ ။အနာရဲ့ ဘေးပတ်လည်ကိုLidocaine ထုံဆေးထိုးပေးတဲ့ အချိန် အဲဒီခလေး အာပြဲကြီးနဲ့ အော်ငိုပြီး ပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းကြောင့်ကိုယ်လည်း အိပ်ချင်စိတ်တွေ ဘယ်ပျောက်ကုန်မှန်းမသိတော့ပါဘူး ။ သူ့ ကိုဘဲ စိတ်ဆိုးရမလား။ကိုယ့် ပုံစံကဘဲ တကယ် အဲဒါနဲ့ တူနေလို့ လားဆိုတာ ။မခွဲခြားတတ်တော့ပါဘူး ။
သူအော်ငိုပြီးပြောချက်ကဖြင့်...။ အောင်မလေး အမေရဲ့ ။ သူကိုက်တာက ခုန ခွေးကိုက်ခံရတာထက် ပို နာတယ် တဲ့ လေ ။
အဟဲ ။။ စိတ်ထဲတော့ အတော်လေး အောင့် သွားတယ် ။ဒါပေမဲ့သူက ခလေး ၊ ပြီးတော့ လူနာ လေ ။။ ကိုယ် ဘာပြန်လုပ်လို့ ရမှာလဲ နော် ။။ သည်းခံ သည်းခံ ....
ဒီလို အလားတူ အဖြစ်မျိုး။ ငိုအားထက်ရယ်အားသန်ရတဲ့ ကိုယ်တွေ့ လေးတွေ နောက် လမ်းကြုံရင် ဂျမ်းပုံတို့အိမ် လာရင် ထပ်ပြောပြပါမယ် ။
:kiki : at 2/27/2009 11:37:00 AM
ဒီည အလုပ်ဆင်းတဲ့ အချိန် blogလေးပြေးအဖွင့် ... တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အချစ်အကြောင်းရေးခိုင်းနေတဲ့ချာတိတ်နဲ့မချစ်ရဘူးလို့ပြောနေတဲ့ချာတိတ်မ တယောက်တို့link ၂ ခု အထက်အောက် တင်ထားကြတယ်။ အဟဲ ဖူးစာရွာလည်ပြီ လားမသိပါဘူး ။
အချစ်ဝမ်းတွင်းရူးလေးကို ဒီအချစ်အကြောင်းတွေရေးခိုင်းနေတာ ။ စူဠလိပ်ရေထဲချလိုက်သလို ဖြစ်နေရော့မယ် ။
ကိုရဲရေ မင်းတော့ လူရွေးမှားပြီကွ ။ နာ့ကို လာရေးခိုင်းနေလို့ ကတော့ ပေါက်ကရ အတွေးတွေနဲ့ပေါက်ကရအချစ် တွေဘဲ သိရမှာ နော် ။အချစ်ဋီကာ အပိုင်း (၁) သိချင်ရင် 2008/11/6 ကိုပြန်ဖတ်ပါဟယ် ။ထပ်မရေးချင်တော့လို့။
အခုတော့ အပိုင်း(၂) လို့ သဘောထားပေါ့ဟယ် ။ နောက်တခု စဉ်းစားမိတယ်လေ ။ပေါချောင်ကောင်း အကြံလေး ။
ဒီလိုလေ ဒီထက်သိချင်ရင် အချစ်အကြောင်းရေလည်နောကြေပြီး ချစ်တာတွေကို စိတ်ကုန်သလိုလိုပြောနေတဲ့ ၊
လာမချစ်ကြပါနဲ့ လို့လေသံပြစ်နေသူတွေကို သွားမေးကြည့် ပါလား ။ အဟဲ ရှန်တိန်လုပ်ပေးလိုက်တာ ။
အင်း။ အတည်ပေါက်ပြောရရင် အချစ်မှာ စကားလေးတလုံးနဲ့ ကို ရှုပ်နေတာနော်။ ၁၅၀၀ ဘိုးရှိတဲ့
အချစ်မှာမျက်စိမရှိပါ ဆိုတာ ဟုတ်မယ်နော်။ ချစ်ချင်တဲ့ သူကို ချစ်ချင်တဲ့ အချိန် ချစ်သွားတတ်တာဘဲလေ။
ခု အင်တာမနက်တနက်ခေတ်မှာ ပိုဆိုးသေး။လူမမြင် ၊ အသံမကြားရဘဲ chatting နဲ့ တင် စိတ်ကူးယဉ်ပြီးလဲ
ချစ်သွားကြတာ ရှိတယ်ဆိုလား ။
ပြီးတော့ရှိသေး ..မျက်ကန်းတစ္ဆေမကြောက်ဆိုတာ။ ချစ်နေတုန်း မွှန်တာနေမှာပေါ့။
တချို့ ကပြောတယ် ၊ အချစ်ဆိုတာ ရယူ ပိုင်ဆိုင်ချင်တာ တဲ့။ .
တချို့ ပြောတော့ပေးဆပ် တာတဲ့ ။
တချို့ က ပြောတာ တိတ်တိတ်လေးချစ်သွားမယ်တဲ့(အယ်လ်ဆိုင်းဆီ သီချင်းပေါ့)
တချို့ တလေကျ အုံ့ ပုံး ချစ်တာတဲ့( မပြောရဲလို့။ ဒါမှမဟုတ် ဘဝ နှစ်ခုဝေးကွာလို့ သူ့ ကိုယ်သူ အားငယ်စိတ်
ဝင်နေလို့။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်စိတ် ကင်းမဲ့ နေလို့အစရှိတဲ့အကြောင်းလေးတွေ ဖြစ်မှာပေါ့)
တချို့ ကျ ဇွတ်အတင်းချစ်တာ တဲ့ ။ (ဒါက နာမယ်သာ မကောင်းတာနော် သူ့ အတွက်တော့ သူလုပ်ချင်တာလုပ်ရလို့ကောင်းတယ်)။
တချို့ ကျမလွတ်မကင်းချစ်တာတဲ့ ( ရည်းစား၊ ယောကျာင်္း လက်ရှိ ငုတ်တုတ်ကြီးရှိနေတာ သိရဲ့ နဲ့ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် လိုက်ချစ်ကြိုက်တာလေ )
ဘယ်လိုဘဲပြောပြော အချစ်မှာ တဏှာပါလာရင် အနည်းနဲ့ အများ မီးလို ပူတတ်ကြတာဘဲ။
အေးချမ်းတဲ့ အချစ်ဆိုတာ အကောင်းဆုံးပေါ့ .။ ဒါပေမဲ့သိတယ်မဟုတ်လား။။ လူတွေလေ ။။
ပိုးဖလံမျိုးမီးကိုတိုး၏ ။။ ပူမှန်းသိသိကြီးနဲ့ ဒါကိုဘဲ မက်မောတွယ်တာစွာ မကြောက်မရွံ့ လက်တဲ့ စမ်းချင်နေကြတာ ။အထိနာတော့မှ သိကြတယ် ။
တချို့လဲ ကောက်ရိုးမီးလို ဝုန်းကနဲ ထတောက်သလို အချစ်မျိုးနဲ့ လေ ။သူချစ်နေတုန်းတော့ အရူးအမူးပေါ့ ။
ပြီးအခါကျတော့ရိုးအီသွားတာလား ။ အရှိန်ကျသွားတာလားမသိ မချစ်တော့ဘူးတဲ့ ။သူ့ ကို လာပြီးမချစ်ရဘူးတဲ့ ။ ဒါက အတ္တကြီးတဲ့ အချစ်လို့ သတ်မှတ်ရမလားမသိပါဘူး ။ချစ်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်ဆိုတာလေ။ လိုတဲ့ အချိန်
လက်ဖြောင့်တီးလိုက် ။ အခစား ဝင်မဲ့ သူတွေ တန်းစီနေတာ ။ one goes , two come , three wait တဲ့ လေ။ဒီလို ယူဆထားတတ်ကြတဲ့ လူတွေလဲ ရှိတယ်။ မလိုချင်တော့ရင် ကန်ထုတ်လိုက် ။ သူ့ အတွက်က ဘာမှ
တချို့ ကျတော့ သူ့ ကို မချစ် ချစ်အောင် အတင်းလိုက်မြှုဆွယ်၊ တဖက်သား ကသူ့ကိုတကယ်လည်းချစ်သွားရောမသိချင်ရောင်ဆောင်နေ လိုက်ပြီး ၊အချစ်ကိုအပျော်တမ်း အပျင်းပြေကစားတတ်ကြတာ။
များများချစ်တဲ့ သူက မျာများခံရတယ်နော် ။လေးလေးနက်နက် မရှိတဲ့သူကျ ဒီလို မခံစားရတော့ဘူး ။
ဒီတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ပေါ့။ မချစ်ရမဲ့ သူကို ၊ မချစ်တတ်တဲ့ သူကို ။အချစ်ကိုတန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့သူကို ဇွတ်အတင်း မချစ်မိ ဖို့ .. ဒါတွေက ကိုယ်သိထားသလောက် အချစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေထဲက လောလောဆယ်သတိရတာလေးတွေပါ။ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ဆိုတော့ အချစ်အပေါ် ထင်မြင်ချက် ခံယူချက်တွေလည်းအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ရှိမှာပေ့ါ။
ကိုရဲရေ..မင်းဒုက္ခ လာပေးနေတာနဲ့ငါ့ ရဲ အိုမင်းဟောင်းနွမ်းနေတဲ့အချစ်လေး ဘယ်လို ရှေ့ ဆက် ရမယ်မှန်း
မသိတော့ ကြောင်းပါ ။ဒီလောက် နက်နဲ နက်ရှိုင်း ကျယ်ဝန်းတဲ့ အချစ် အဓိပ္ပါယ်ကြီးကို ငါ့လို မချစ်တတ် ချစ်တတ် ဝမ်းတွင်းရှုး အချစ် ကိုမှ လာပြီး အနက် အဖြူ အဓိပ္ပါယ် လာဖေါ်ခိုင်းနေတာ ။ မသိတသိ မသိသလို သိသလို ဟာကို သိပ်သိ သလိုမျိုး ပုံစံနဲ့ရွှီးပေးလိုက်တယ် ။
မင်းဒီထက်မက အချစ်အကြောင်း သိချင်နေသပ ဆိုရင် အများကြီး အများကြီး ချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူ ။ အချစ်ကို လန့် ချင်ယောင် ၊ လန် ချင်ယောင်ဆောင်နေသူတွေကို လိုက်မေးပေတော့ဝေ့။ နာတော့ဒီလောက်ဘဲ တိဒယ် ။ ခုလောလောဆယ်တော့ အိပ်ချင်နေတာဘဲ သိတယ် ။ ဒါမှ အိပ်မက်ထဲ မှာ အာခြစ်နဲ့တွေ့ ရမှာလေ ။။
ဒီလောက်နှိပ်စက်ရရင်ကျေနပ်ပါတော့(စိုင်းထီးဆိုင်ကိုတောင်သတိရလာပြီ ) ။ မကျေနပ်ရင် လေဖြ.....အဲယောင်သွားလို့ဂတ်တိုင်လဲ အလကားဘဲ ။ကိုယ့်ပြသနာကိုယ်ကြည့်ကျက်ရှင်းပါတော့။။
:kiki : at 2/26/2009 02:59:00 AM
* ဘာမဟုတ်တဲ့ ထောက်ထားမှုလေးတွေကို ကြုံရင်ကြုံသလို လုပ်လိုက်မိလို့ ဘာမှ နစ်နာ မသွားနိုင်ပါဘူးနော် ။
* ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်ကို ချစ်တယ်လို့ ပြောလိုက်လို့ ဘာမှ နစ်နာ မသွားနိုင်ပါဘူးနော် ။
* သားသမီးလေးတွေကို သိပ်လိမ္မာတာပဲလို့ ချီးမွမ်းလိုက်မိလို့ ဘာမှ နစ်နာ မသွားနိုင်ပါဘူးနော် ။
* ဆိုက္ကားဆရာကို ရေတစ်ခွက် တိုက်လိုက်လို့လဲ ဘာမှ နစ်နာ မသွားနိုင်ပါဘူးနော် ။
* တန်းစီနေခိုက်မှာ ကိုယ့်ရှေ့က တစ်ယောက်တစ်လေ ကြားဖြတ်ဝင်တာကို သည်းခံလိုက်လို့လဲ ဘာမှ နစ်နာ မသွားနိုင်ပါဘူးနော် ။
* အစ်ကို အစ်မတွေဆီကို သတိရကြောင်း ဖုန်းလေးနဲ့လှမ်းပြော ၊ စာလေးနဲ့လှမ်းပြောလိုက်လို့လဲ ဘာမှ နစ်နာ မသွားနိုင်ပါဘူးနော် ။
* မမာနေတဲ့ အပေါင်းအသင်းဆီ စားစရာလေး တစ်ခုခု သွားပို့လိုက်လို့လဲ ဘာမှ နစ်နာ မသွားနိုင်ပါဘူးနော် ။
* အိုမင်းမစွမ်းသူ တစ်ယောက်အတွက် ကိုယ့်နေရာကို ဖယ်ပေးလိုက်လို့ ဘာမှ နစ်နာ မသွားနိုင်ပါဘူးနော် ။
* အများအကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးသူတစ်ယောက်ကို အားပေးစကားဆိုလိုက်မိလို့ ဘာမှ နစ်နာ မသွားနိုင်ပါဘူးနော် ။
* ဟင်းချက်စရာကို တောင်းထဲထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ဈေးသည်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတရ်ဗျာ/ရှင်လို့ ပြောလိုက်လို့လဲ ဘာမှ နစ်နာ မသွားနိုင်ပါဘူးနော် ။
* အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ခွေးကလေးနဲ့ ခုန်ပေါက် ကစားလိုက်လို့လဲ ဘာမှ နစ်နာ မသွားနိုင်ပါဘူးနော် ။
* ကိုယ့်လက်အောက်က အလုပ်ပင်ပန်းနေတဲ့ အမှုထမ်းကို ရက်တွက်မဖြတ်ဘဲ တစ်ရက်တာ အနားပေးလိုက်လို့လဲ ဘာမှ နစ်နာ မသွားနိုင်ပါဘူးနော် ။
* ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်သုံးသပ်ပြီး နောက်တစ်ခါ အလားတူ အမှားမျိုး မကျူးလွန်ဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်သုံးသပ်လိုက်လို့လဲ ဘာမှ နစ်နာ မသွားနိုင်ပါဘူးနော် ။
* ဒီ ဘာမဟုတ်တဲ့ ထောက်ထားမှုလေးတွေကိုပဲ ကြုံရင် ကြုံသလို လုပ်ရင်းနဲ့ ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းသွားလိုက်လို့လဲ ဘာမှ နစ်နာ မသွားနိုင်ပါဘူးနော် ။
Sandy Ezrine ရေးတဲ့ It couldn't hurt ကို ဆရာအတ္တကျော်က ဆီလျှော်အောင်ဘာသာပြန်ပေးထားတဲ့ စာစုလေးတွေပါ ။ ကျွန်တော်တို့ ဘ၀မှာလဲ ဒါလေးတွေက နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကြုံတွေ့နေရတာပါ ။ ကိုယ့်မျက်စိအောက်မှာပဲ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဒီအရာလေးတွေကို ထောက်ထားသင့်ပါရက်နဲ့ လောဘ ၊ အတ္တ ၊ မာန တို့ကြောင့် လစ်လျှူရှုဖြစ်နေတာလဲ အားလုံးလိုလိုပါပဲ ။ ဒါကြောင့် ဒါမျိုးလေးတွေကို သူငယ်ချင်းတွေ အနေနဲ့ မြန်မာလူမျိုးပီပီ ထောက်ထားညှာတာလိုက်လို့ ဘာမှ နစ်နာသွားနိုင်ပါသလဲ...?
နတ်သဘင်မှအရူးလေးတယောက်ရဲ့ အတွေးအခေါ်လေးတွေ ကြိုက်လို့ပြန်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်တာပါ။
ဒီလွယ်လွယ်ကူကူ ကိစ္စလေးတွေကိုတောင် လူအတော်များများက လိုက်လုပ်နိုင်ဖို့ သိပ်မလွယ်ကြဘူးနော်။ ဪ..လူ့ စိတ်..
ငါပြောသလိုလုပ်..ငါလုပ်သလို မလုပ်နဲ့ ဆိုတာ ဒါမျိုးတွေလား ။ ။ ။ ? ? ?
:kiki : at 2/25/2009 02:52:00 PM
ဒီရောက်ကတည်းက အလုပ်ကိုတပါတ်မှာ ၆ရက်..တရက်ကို ၁၆ နာရီ အလုပ်ချိန်ကို မလုပ်ချင်လုပ်ချင်၊လုပ်နေရတာဘယ်ဝဋ်ကျွေးလည်းမသိပါ။ တနင်္ဂနွေတရက်ဘဲအနားရတယ် ။
ဒီရှားရှားပါပါး နားတဲ့ တရက်မှာ များသောအားဖြင့် တယောက်ထဲဟိုပတ်ဒီပတ် လျှောက်သွားနေကြပါ။လေပြင်းမုန်တိုင်းကျတဲ့ ရက်တောင် အလွတ်မပေးတတ်ဘူး။ အဟဲ အိမ်နဲ့ သိပ်ဓါတ်မတည့်လို့ နဲ့ တူပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်၊ခြေထောက်မှာဗွေပါလို့လားမသိပါ။အိမ်မှာမကပ်ချင်ဘူးလေ။ ခုတလော သွားပတ်တတ်တဲ့နေရာလေးကတော့ MRT မြေအောက်ကြွက်တွင်းမှ အရောင်းဆိုင်တန်းတွေပါ ။မိုးလုံ၊လေလုံ၊ နွေဆိုလဲ အဲယားကွန်းအပြည့်နဲ့မို့ အေးအေးဆေးဆေး။စားသောက်ဆိုင်တွေလဲအစုံ ၊ခေတ်လူငယ်ကြိုက်ပစ္စည်းလဲအစုံရ ၊ဈေးလဲ သက်သာတဲ့ ဆိုင်တွေအများကြီးရှိလို့ လေ ။ပေါချောင်ကောင်းကြိုက်သူ အီဖေကိုယ် အကြိုက်နေရာလေးတခုပေါ့။
ဒီနေ့ တော့ဒီကြွက်တွင်းထဲ အရိုးရှာဖို့တာဝန်တခုနဲ့ ရောက်ခဲ့ သေးတယ် ။(အဟဲ စကားဝှက်ပါ ။သက်ဆိုင်သူတယောက်ဘဲ ဒီအဓိပ္ပါယ်ကိုသိမှာပါ ။ဒီအကြောင်းနောက်မှအဖြေပြောပြမယ်နော်)။
ဒါပေမဲ့ ခြေသာတိုရော ။ အရိုးနဲ့တူတာဆိုလို့ ငဖေါင်ရိုးတောင်မတွေ့ မိဘူး( ဒီကလူတွေ အစားသောင်းကျန်းလို့ဝကစ်ကစ်လေးတွေများတယ် ) ။ဒီတော့တွေ့ တာ မြင်တာလေးတွေဘဲ ထဲ့ ပေးလိုက်ရတယ် ။ ဒီကအခြေခံလူတန်းစားတွေ ။ လူငယ်လေးတွေ အားလပ်ရက်တွေကို ဘယ်လို အသုံးချကြသလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းများထဲက တစေ့တစောင်းလေးတွေပါ..
ဒီအထဲမှာကြည့်ခဲ့ရတဲ့မျက်လှည့်ပွဲလေးက အတော်လေးကောင်းတယ် ။ဒါပေမဲ့ ရိုက်ထားတာ ၁၀ မိနစ်စာ .ပေရှည်သွားလို့နဲ့ တူပါရဲ့ဘယ်လိုမှ upload လုပ်မရလို့မတင်ပေးလိုက်ရဘူး။ သိတဲ့ လူတွေ ပြောပြကြပါအုံး။
ဒါကြောင့် တင်လို့ ရတဲ့ အတိုအထွာလေးဘဲ ထဲ့ပေးလိုက်တာ စိတ်မရှိပါနဲ့ နော်..
ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ကိုယ့်အဖွဲ့ နဲ့ ကိုယ် သီချင်းဆိုကြ ၊အကတိုက်ကြနဲ့ပေါ့ ။ဗမာပြည်က ခလေးတွေမှာရော ဘာလို့ ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေ မရှိကြရတာလဲနော် ။အားရင် လဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင် ၊ အတင်းပြောနေကြမဲ့ အစား အသုံးဝင်တာ တခုခု လုပ်နေနိုင်ဖို့ဘယ်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိပါသလဲ။
:kiki : at 2/22/2009 09:03:00 PM
လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ငွေစက္ကူ (ဘယ်ဖက်က အရွက်ကြီး) နှင့် အလကားရတဲ့ စားသုံးသူ လက်မှတ် 消 費 卷(ညာဖက်က အသေးလေး )
ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံ အသီးသီး စီးပွားရေးကျလို့ တာဝန်သိတဲ့ အစိုးရတွေက ကိုယ့်တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ပြန်လည်ဦးမော့လာရေးအတွက် တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားနေကြတယ် ။ ဒီနိုင်ငံက အစိုးရကလည်း အခြားနည်းလမ်းတွေအပြင် ဝယ်လိုအားမြင့်လာအောင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဦးဆုံးအနေနဲ့စားသုံးသူအခမဲ့ ဝယ်ယူခွင့်လက်မှတ် လေးတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ မှာပထမ အသုတ်အနေနဲ့နိုင်ငံသားအားလုံး( ၂၀၀၈ခုဒီဇင်ဘာ ၃၁ ထိမွေးတဲ့ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသူများ) ကို ၃၆၀၀ NTD( New Taiwan Dollar-US$ ၁၀၀ ကျော်) စီ တန်ဘိုးနဲ့ ညီမျှတဲ့ကူပွန်လေးတွေ ကို အလကား ပေးဝေခဲ့ တယ် ။ ဒါဟာ ဇန္နဝါရီ ၂၅ တရုပ်နှစ်သစ်ကူးမတိုင်မီ လူတွေ ဝယ်နိုင်အောင် အမှီလုပ်ပေးလိုက်တာလေ ။
အဲဒီ စထုတ်ပေးတဲ့ နေ့ ကဆို လူတွေ က သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အလိုက် ကောင်စီရုံးလိုနေရာတွေမှာ ကိုယ့်မှတ်ပုံတင် ။သန်းကောင်စာရင် ။ တံဆိပ်တုံး၊ အကြောင်းကြားစာရွက်တွေယူပြီး တန်းစီထုတ်ရတာ ။ ပျော်စရာကြီး။ အင်းလေ ..အလကားရတာဘဲနော် ။ ပျော်ကြတာပေါ့။ ဟီး ၊ အီဖေကိုယ်တောင် အဲဒီနေ့တနင်္ဂနွေ မနက် တက်နေကျတောင်ပေါ်ကိုကြာကြာမတက်ဘဲ စောစောစီးစီး တန်းသွားစီပြီး ထုတ်လိုက်သေးတယ်။စိတ်ချရအောင်လေ။တော်ကြာမရလိုက်ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ဇွဲကောင်းလိုက်ရတယ် ။
အဲဒီတနေ့ တည်းတင် departmental store ဆိုင်ကြီးတွေမှာ ရောင်းအားဟာ သာမန် ထက် ၈ ဆလောက် တက်သွားတယ်တဲ့ လေ။တခြားဆိုင်တွေလဲ အလားတူ .ရောင်းအားအတော်တက်သွားကြတယ် ။ ဘယ်လောက်ကြာကြာခံမလဲတော့မသိပါဘူး ။လူတယောက်ကို ၃၆၀၀ နှုံး ၊ လူဦးရေ ၂၃ သန်း ကျော်ရှိနေတဲ့ ဒီမှာ ဘယ်လောက် ကုန်သွားပြီလဲ ။ ဘီလီယံ ၈၀ ကျော် အစိုးရက စိုက်ပေးထားရတယ်ပေ့ါ ။ အင်း ...သူကရော ဘယ်လောက်ချမ်းသာလို့ဘယ်လောက်ကြာကြာ ဒီလို ပေးနေနိုင် မှာလဲ ..
ဒီအတွက် နောက်ပိုင်းမှာ အခွန်ငွေတွေ ပိုကောက်ရင်ကောက်မှာပေ့ါလေ ။ ဒီတော့လဲ သိပ်မထူးလှပါဘူး ။ ကိုယ့်အိပ်ကပ်ဘဲ ထပ်ပိန်အုံးတော့မယ်။
အာ .. တွေးနေတာရှုပ်တယ် ။ အများနဲ့ ခံရတာ တတ်နိုင်ပါဘူး ။ထားလိုက်တော့ နောင်ခါလာ၊ နောင်ခါဈေး ဘဲ
ခုလောလောဆယ် အလကားရတဲ့ ဒီပိုက်ပိုက်လေးကို ဘာဝယ်ရရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားတာဘဲ ကောင်းပါတယ် ။
ဒီ လက်မှတ် လေးတွေကလဲ ဒီနှစ် စက်တင်ဘာလ ကုန်ရက်အထိဘဲ သုံးလို့ ရမှာလေ ။ သူများတွေတောင် ချက်ခြင်းသုံးလိုက်ကြလို့ ကုန်ပြီတဲ့။ အဟဲ ။အီဖေကိုယ်က သာ နှမြောတသ ဘဂဝတော နဲ့ မသုံး ရသေးဘူးလေ ။ ဒီတပတ် တော့ ဆုံးဖြတ်ချက် လုံးဝ ချလိုက်ပါပြီ ။ မနက်ဖန် တနင်္ဂနွေ ..အားတဲ့ရက် ဈေးဝယ်ထွက်ပြီး ချစ်ရသူအတွက် အမှတ်တရလေး တခုခု ဝယ်ပေးမလို့ ။
ဒီလက်မှတ်လေး လက်ထဲက မထွက်ခင် အမှတ်တရ အနေနဲ့ ဓါတ်ပုံလေးရိုက်ထားပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ ။
ခုထိ ဘာဝယ်ရမှန်း မသိသေးဘူး ။ဒီလက်မှတ်လေးနဲ့ သွားဝယ်ရင် များသောအားဖြင့် ဆိုင်တွေမှာ နောက်ထပ် ၁၀ မှ ၂၀ ရာခိုင်နှုံး ဒစ်စကောင့် ထပ်ပေးတယ် ပြောကြတယ် ။။အဟား ။ဇိမ်ဘဲနော် ။ ဒီကောင့်ကဒ်နဲ့သွားကပ်အုံးမှဘဲ ။ အချစ်ကလေးရေ
...ဘာလိုချင်လဲ ပြောနော် ။။နောက်ကျနေရင် ရှိတာလေးကုန်သွားအုံးမယ်။။
ဘယ်ဖက်က အရွက်ကြီးတွေက တကဲ့ ပိုက်ဆံ အစစ်။ ၁၀၀၀ ၊၅၀၀ ၊၁၀၀ တန် NTD , (၂၀၀ တန်က လက်ထဲ အဆင်သင့် ရှာမတွေ့ လို့မထဲ့ ပေးလိုက်ရပါ ။
ညာဖက်က အရွက်အသေးလေးတွေက စားသုံးသူတွေလဲလှယ်ခွင့် လက်မှတ် ၅၀၀တန် နဲ့ ၂၀၀ တန် ။မသုံးလိုက်မှီ အမှတ်တရ ။
:kiki : at 2/21/2009 11:34:00 AM
ဒီနေ့ နေလို့ သိပ်မကောင်းလို့စာမရေးဘဲ နားမလို့ စ်ိတ်ကူးထားတာ ။ သူငယ်ချင်းယောက်ပို့ လာတဲ့ မေးလ်ဖွင့်ကြည့် ရင်း ဒီပုံတွေတွေ့ လိုက်ရတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့အတော်လေးခံစားမိလို့တဆင့်ပြန်ပြီးဖေါက်သည်ချလိုက်ပါတယ်။
ဘုရားရုပ်တုတော် ဆင်းတုတော်တွေကို ဘာလို့ ဒီလိုဖျက်ဆီးပစ်ရတာလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သိချင်လာပါတယ် ။ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းတခုခုဖြစ်စေချင်လို့တမင်သက်သက် ဒီပုံတွေ youtube ပေါ်မှတကမ္ဘာလုံးကို ပြသတာလား ။ ဒါမှမဟုတ် ဒီဘုရားကျောင်းအဆောက်အဦ ဟာ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဆောက်ထားလို့ဖြိုဖျက်ပစ်တာလား ။၊?????
သိတဲ့ သူများရှိရင် ပြောပြ ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ် ။ တဖက်သပ်အမြင်နဲ့မတွေးကြဘဲ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရှုထောင့် မှကြည့် ပြီး အဖြေရှာနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်လျှက်....
:kiki : at 2/20/2009 12:42:00 PM
ယနေ့ ကမ္ဘာမှာ နိုင်ငံတိုင်းလိုလို စီးပွားရေးကျပြီး ကပ် ဆိုက်နေကြတာ ။ အလုပ်လုပ်နေသူတိုင်း ၊ စာဖတ်နေသူတိုင်းသိကြမှာပါ ။
ကိုယ်တိုင်က ဘာ စီးပွားရေးမှ မလုပ်တတ် ၊ Stock & Share တွေ နားမလည် ၊ မကစားတတ်ပေမဲ့အဲဒီ စီးပွားရေး ဆုပ်ယုတ်ကျဆင်းမှုကို ခံစားမိပါတယ် ။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့အလုပ်က ဝင်ငွေဟာ ခါတိုင်းရနေကျ ထက် တဖြေးဖြေးပိုနဲလာ လာတာ ၊ အစက မသိသာပါဘူး ။နောက်ပိုင်းမှာ ဟို အခွန်အတွက် နှုတ် ၊ ဒီ အာမခံကြေးအတွက်နှုတ် တာတွေ ၊ လခ လျှော့တာတွေကြောင့်ဝင်ငွေ နည်းသွားတာ ပိုသိသာလာတယ် ။
ဒါတောင် ဒီအလုပ်က တည်မြဲနေသေးလို့တော်သေးရဲ့။ တချို့ များဆို အလုပ်ပါ ပြုတ်ကြရရှာတယ် ။ ဒီနိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ လောက်က အလုပ် အင်မတန်ပေါတာ ။ ဒီတခု မကြိုက်ရင် နောက်တခုပြောင်းလုပ် ။ အချိန်မရွေးဘဲ ။ဘယ်နေရာ သွားရှာရှာ အလုပ်တွေ ။စက်ရုံတွေ ပေါမှပေါလေ ။ ယပက်လက်တို့ ။ ဖဦးထုပ်တို့ တတွေလဲ ဒီမှာ သိန်းနဲ့ ချီပြီး အလုပ်သမား ဦးရေ ရှိတယ် ။
ခု ဒီဖက် ၃ -၄ နှစ် လောက်မှ စပြီး စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွေကို လုပ်အားခ ပိုသက်သာတဲ့တရုပ်ပြည်မ ကြီးကို ပြောင်းပြီး ဖွင့်ကြလို့ဒီကလူတွေ အများကြီး အလုပ် လက်မဲ့ဖြစ်ကုန်ကြတယ် ။အလုပ်မရှိ ၊ ဝင်ငွေမရှိ တော့ လူတွေ ဒုက္ခရောက်ကြတာပေါ့ ။
ပိုက်ဆံမရှိတော့ဟိုအရင်လို ဝယ်ကြ သုံးကြ လည်ကြ စားကြတွေလည်း တဖြေးဖြေး နဲလာကြတာပေါ့ ။ မလိုတာတွေ အပိုတွေ မဝယ် ၊ မသုံးကြတော့ဘူး ။ဒီတော့ ရောင်းအားလဲကျ ပြီး မုံ့ လုံးစက္ကူ ကပ် စီးပွားမပြေလည် သံသရာလည်နေကြတာ။
ဒါတွေက အများနဲ့ ဖြစ်နေကြတာ တွေဆိုတော့ မတတ်နိုင်ပါဘူး ။ကိုယ့် အလုပ်လေးမပြုတ်သေးတာဘဲ တော်လှပြီ ။ နဲနဲပါးပါးတော့ခြွေတာနေရတာပေါ့ ။ အရင် လို လက်သိပ်ဖွာလို့မရတော့ဘူးလေ ။
ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းက ခုမှရောက်တော့တယ် ။ ဒီလို ဒီလို ဒီလိုပါ
စားသုံးသူဖက်က ဝယ်လိုအားနဲတော့ ရောင်းအားလဲ ကျတာပေါ့ ။အလုပ်ရုံ ၊ စက်ရုံတွေလဲ လျှော့ထုတ်ရ ။ လောင်စာဆီက ဈေးတက် ။ထုတ်ကုန်တွေလဲ ဈေးတက်နဲ့ဒေဝါလီ ခံလိုက်ရတဲ့ဘဏ်တွေ ၊ ပိတ်လိုက်ရတဲ့စက်ရုံတွေလဲ မနဲပါဘူး ။စားဝတ်နေရေး မပြေလည်လို့့ အကြွေးတွေ ပတ်လည်ဝိုင်းပြီး အတိုး၊ အရင်း တွေပါ ပြန် မဆပ်နိုင်ကြလို့ကိုယ့်ကို ကိုယ် သတ်သေ ရုံတင်မက . အပစ်မဲ့တဲ့ကိုယ့်ခလေး တွေပါ အပါခေါ်ပြီး မရဏလမ်းကို သွားကြသူတွေလည်း မနဲလှဘူး ။ နေ့ တိုင်းလိုလို သတင်းတွေထဲ ကြားနေရတယ် ။ သေနည်းတွေလည်းအစုံပါဘဲလေ ။ ဒါတွေကရော... သေနေ့ စေ့ လို့ သေကြရတာတွေလား ။ပြောရခက်တယ်နော် ။
ဒီ အနိ ဌာရုံ ပုံတွေကိုတော့ ထမင်းစားပျက်မစိုးလို့မဖေါ်ပြပေးတော့ပါဘူး ။
ဒီနိုင်ငံက လူတွေ အတော်များများဟာ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းမှု မှာ ဗမာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလောက် လေးလေးနက်နက်မရှိကြဘူး ။ပြီးတော့နတ်တွေ ကိုးကွယ်ကြတာများတယ် ။ ဒါကြောင့်တခုခုဆို သည်းငြီးခံတတ်တဲ့ စိတ်နဲပါးတယ်။ လူတိုင်းကိုတော့မဆိုလိုပါဘူး။အများအားဖြင့်ကိုပြောတာပါ ။ ပြီးတော့ ဆင်းရဲခြင်းဒါဏ်ကို သိပ်မခံစားနိုင်ကြဘူး ။ သမီးရည်းစား စကားများရုံ ၊ကွဲရုံ ၊ မိဘကဆူလိုက်ရုံ ။ ဆရာ ဆရာမ ကဆူလိုက် ရိုက်လိုက်ရုံနဲ့ကိုယ့် ကိုကိုယ်သတ်သေတာတို့ ။သူများကို အညှိုးနဲ့ ပြန်ရန်လုပ်တာတို့။ သတ်ပစ်တာတို့လုပ်တတ်ကြတယ် ။ ဗရမ်းဗတာ တွေဖြစ်တတ်ကြတယ် ။ ခုခေတ် သူတို့ ရဲ့ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အကျင့်စရိုက်တွေ။ အတွေးအခေါ်တွေ က ဒီလို ဖြစ်ဖို့လမ်းပြပေးသလို ဖြစ်နေကြတာပေ့ါ ။ မိဘ နဲ့ သားသမီးအရင်းခေါက်ခေါက်တွေတောင် ပြန်သတ်တဲ့ အကြောင်းတွေ မကြာခဏဆိုသလို မြင်နေ ၊ ကြားနေရပါတယ် ။
အဲဒါတွေ ကို ကိုယ်တို့ ရဲ့ ချစ်သော အမိ မြန်မာပြည်ကြီးမှ အခြေအနေတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခံစားကြည့် မိတယ် ။အလုပ်မရှိ အလကား အားနေတဲ့ အချိန်လေးတွေ ဒီလိုဘဲ လျှောက်တွေး၊ လျှောက်ရေး နေတာ ။ ဘယ်တော့ ပြသနာ တက်မလဲ မသိဘူး ။
ဗမာပြည်မှာ စီးပွားရေးကျ ကပ်ဆိုက်တဲ့ ဒါဏ်တွေ မရှိပါဘူးတဲ့။ တနှစ်မှာ GDP(Gross Domestic Product) ၈ ရာခိုင်နှန်း တက်နေတဲ့ အကြောင်း ၊ အရူးစကားက်ို ဒဏ္ဍရီ ဆန်ဆန်ပြောတာ ၊ အံ့သြစရာတော့ မရှိလှပါဘူး(အဟဲ၊ စီးပွားရေးတောင့် နေပြီးသား နိုင်ငံကြီးတွေမှာတောင် တနှစ်မှာ GDP က ၃ တို့၎ တို့ လောက်ဘဲ ရှိကြတာ ။မယုံရင် ပုံပြင်မှတ်ကြပေ့ါလေ ) ။ နဂိုကတည်းက ဟိုးအောက်ဆုံးထိချွတ်ခြုံကျနေတဲ့ စီးပွားရေး ဆိုတော့ ဒိထက်အောက်ကျစရာမှ မရှိတော့တာလေ ။ ဒို့ လူမျိုးတွေကလည်း မွေးကတည်းက ဆင်းရဲတွင်းရဲ့ ဟိုးအောက်ဆုံးမှာနေခဲ့ကြရတာ ဆိုတော့ကျင့်သားရနေပြီးသားဘဲ ။ ဘာဖြစ်သလဲ ဒို့ ရွှေ ဗမာတွေ ဆိုတာ နက်ဖန် စားဖို့ဆန်အိုးထဲမှာ ဆန်မရှိရင် လဲ ကိစ္စမရှိဘူး ။ လောလောဆယ် ဒီည မှာ IC စတိတ်ရှိုး ပွဲလေး မကြည့် လို့ မဖြစ်ဖူး ။ ၄၊၅ ထောင် ပေးပြီး အပြေးသွားကြည့် ရမှလေ ။ အဲသလောက်ကို ပွဲကြိုက်ကြတာလေ ။ ကျန်တာတော့ နောင်ခါလာ နောင်ခါဈေး ကြည့် ကျက်လုပ်ကြတာဘဲ ။ အမယ်... သူ့ ဟာနဲ့ သူတော့ အဟုတ် ၊ အဆင်ကို ပြေလို့ လေ ။
စီးပွားရေးပျက်လို့၊ မကောင်းလို့ ၊ အကြွေးတွေပတ်လည်ဝိုင်းလို့သတ်သေကြရမယ် ဆိုရင် ဗမာပြည်မှာ ဟို လက်တဆုပ်စာလူတွေက လွဲပြီး ဘယ်သူမှ အသက်ရှင်ရက် ကျန်နေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့တွေးမိတယ် ။
အဲဒါကြောင့်ပျော်ပျော်နေ သေခဲ ဆိုတာ သိပ်မှန်တာဘဲ လို့။ အများနဲ့ မိုးခါးရေ သောက်ကြတာဘဲ ။ ပူပင်သောကတွေ ဝေးဝေးနေကြပစေ ပေ့ါ။
နောက်နေ့ မှ ဒီနိုင်ငံ ရဲ့အစိုးရက ဒီ ဝယ်လိုအား ၊ ရောင်းအား ပိုကောင်းလာအောင် ဘာတွေလုပ်ပေးသလဲ ဆိုတာ နားလည်သလောက် ရေးပြပါအုံးမယ် ။
:kiki : at 2/20/2009 12:25:00 AM
တန်ဘိုးမရှိတဲ့ ဖိုးသုညလို့ ထင်ခဲ့ မိတယ် တချိန်က ၊
သူနဲ့ ပေါင်းဖက် အရာတွေမှာ ဂုဏ်မတက်ပေမဲ့
အနှုတ်မပြခဲ့လို့ တော်သေးရဲ့ 
မြှောက်တော့ပွားများ စားတော့ နဲပါး
ဘယ်လိုတွက်ချက် ဆယ်ဆစီပါဘဲ ။
နောက်တဖန် ရှေ့ နောက်နေရာယူကြည့်
ဆယ်၊ရာ၊ထောင်၊သောင်း၊သိန်း၊သန်း မက ထူးရ ၊
သူ့ ဖာသာ ရှေ့ မှာနေ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေပါဘူး။
ဒသမနောက်မှာ သူ့ ကိုထားက
တပါးသူတန်ဖိုး ဖြုတ်ကနဲ ထိုးမကျစေရန်
ကျားကုတ် ကျားခဲ တောင့်ခံပေးမြဲ ၊
ဆယ်လီအသေးစိတ်ထိ တာဝန်သစ္စာစောင့်သိပေး၏ ။
ဪ ....လိုသလို သုံးကြ သုညလေးဘဝ
လူတွေများစွာ ဒီသုညကို အရောင်မျိုးစုံဆိုးကာ
မင်းရှေ့ မှာနေရင်ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေ ၊ မင်းဂုဏ်ရည် မတက်စေဘူး
မင်းနောက်ကွယ်မှာ လူမသိစွာနေလို့ 
ငါ့ဘဝသုည တခုလုံးဆုံးပါစေလေ ၊
ကန့်လန့် ကာနောက်ကွယ်မှာနေလို့အသုံးတော်ခံပြပါ့မယ် ။
( အင်း ... ကိုယ့်ကို ပြန်မချစ်တဲ့အချစ်တခုအတွက်နဲ့ပျော်တော်ဆက်ဖြစ်လိုက် ၊ သုည ဖြစ်လိုက် နဲ့နောက်တခါ ဘာဘဝဖြစ်အုံးမလဲ မသိဘူး။။
နာနာဘဝ တော့မဖြစ်ပါရစေနဲ့ လို့)
:kiki : at 2/18/2009 11:58:00 AM
လိုက်တော့ပြေးသူ ပြေးလေသူမို့ 
ပြေးလေ ဝေးလေ ဟိုးတမြေထိ
ပြေးချင်သလောက် ပြေးစမ်းရယ်လို့ 
ကြိုးရှည်ရှည်နဲ့လှန်ခဲ့မယ်မှန်း။
လက်လှမ်းလို့ မှီ့ တမှီမှာ
ပင်ထက်မှာ စံပါစေတော့ရယ်လို့ 
မှန်းဆမရ သူ့ စိတ်ကူးအစုံစုံ
မဆုံရတဲ့ ဒီကြမ္မာ ရေ ... ။
( ဒီထက်ဆက်ပြီး မမောပါရစေနဲ့ တော့ရယ်လို့)
:kiki : at 2/17/2009 04:24:00 PM
ချစ်သူများနေ့ မှာ အဖေါ်စုံတဲ့သူတွေ ပျော်ရွှင်နေကြချိန် ...အဖေါ်မဲ့နေတဲ့သူတွေရော ...ပျော်လို့မရနိုင်ဘူးလား ???
သူ့ အတွက် ရင်ခုန်နေရတာတွေ သူမသိနိုင်ပေမဲ့ လည်း ကိစ္စမရှိပါဘူးလေ ။ ချစ်တဲ့ သူနဲ့ အတူပျော်ခဲ့ ဖူးတဲ့အချိန်လေးတွေ .. အတိတ်မှ ရင်ခုန်ခဲ့ ဖူးရတာလေးတွေ ..အဲဒီအချိန်လေး တွေက ပြောခဲ့ ဖူးတဲ့အကြောင်းလေးတွေ ..သွားခဲ့ဖူးတဲ့နေရာလေးတွေ... အတူဆိုခဲ့ ကြဖူးတဲ့ သီချင်းလေးတွေ ပြန်လည် ကြားယောင် မြင်ယောင်ပြီးတော့ သူ့ အတွက် ကိုယ့်ရင်ခုန်သံတွေ ဘယ်သူမှမကြားစေရပါဘူ.... မင်းတယောက်ကလွဲရင်ပေါ့။ မင်းပျော်သလိုသာ နေပါ ။အဝေးကနေချစ်နေရရုံလေးနဲ့ တင်ငါ ကျေနပ်ပါတယ် ။။
:kiki : at 2/14/2009 09:06:00 PM
မျိုကြီးရဲ့ဖြေးဖြေးပြော ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို ဒီတခေါက် မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်မှ ကြားဘူးတယ် ။ထွက်တာကြာနေပြီ ဆိုပေမဲ့အဆက်အစပ် မရှိလှလို့နားမထောင်မိခဲ့တဲ့သီချင်းဟောင်းလေးတပုဒ်ပါ ။ခုကြမှ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တုံး ချစ်တဲ့ ညီမငယ်တို့ နဲ့Karaok နဲ့IC stage show တွေရောက်ဖြစ်တော့မှ စပြီးကြားဖူးခဲ့ တာ ။ ဒီနေ့ လဲ ပြန်လည် ဖြည့်စွက်ထားတာလေးတွေ့ လိုက်လို့သဘောကျတာနဲ့ဒီနေရာမှ ဆားချက်တင်ပြလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံ အပ်ပါတယ် ။
:kiki : at 2/14/2009 09:24:00 AM
စိတ်ကူးနဲ့ ရူးခဲ့ တဲ့ ငါ
ဖြေဖျောက်လဲ မပြေပျောက်နိုင်ခဲ့ ဘူး . . .
မင်းမနှင်ခင်လှည့် ပြန်စေချင်ပါရဲ့ 
ဒါပေမဲ့ လည်း . . .
ဥပဒေမရှိခဲ့ ဘူးလေ . . .
ငါဟာမပြိုင်ခင်ရှုံးနေသူပဲလေ . . .
မင်းသတ်မှတိလိုက်ပါတော့ ကွာ . . .
ငါ့မာနတွေနဲ့ရှိစုမဲ့ စု သိက္ခာတွေ
ခံစားနိုင်ပါစေ . . .
:kiki : at 2/14/2009 02:38:00 AM
ကြယ်စင်ရဲ့ အလင်းရောင်နဲ့ တင်
သူနဲ့ ဝေးရာ ဆွေးကမ္ဘာမှာ
ငါ... ... ...
အသက်မရှူရဲခဲ့ပါဘူး... ... ...။ ။
ကြယ်ရောင်လင်း ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းလေးတယောက် ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရေးသား ခံစားမှုလေးတခုပါ။
သူ့ ကိုယ်စား ဒီနေရာမှ ရင်ဖွင့်ပေးရတာပါ...
ချစ်သူများနေ့ အကြို ... ချစ်သူရှိတဲ့ သူတွေပျော်စရာပေမဲ့ချစ်ရသူနဲ့ အဆင်မပြေသူတွေအတွက်ယောင်တောင်တောင်နဲ့ လေ။ ဒါကြောင့်အချစ်မရှိတဲ့ ဒေသမှ အချစ်ကို တမ်းတခြင်းလေး ပါ
:kiki : at 2/12/2009 10:01:00 PM
ကျားနဲ့ ဆင် လယ်ပြင်မှာတွေ့ ချင်ရဲ့ လို့ 
သူတချိန်က ပြောင်လှောင်သလို ဆိုဖူးခဲ့ 
မင်းက ကျားပါ ၊ ခြင်္သေ့ မှ မဟုတ်တာ
ငါကလည်း ဆင်ပေါ့ တောဘုရင် မဖြစ်ချင်ပါဘူး
ဆင်ဝှေ့ ရန်ရှောင် စကားလုံးများနဲ့ 
စကားနဲ ရန်စဲ အမှားနဲ အောင်
လေပြေထိုးရတာတွေ မင်းမှတ်မိမယ်မထင်ဘူးကွဲ့ ။
ဆင်ခမျာ အကောင်ကြီးပေမဲ့ ၊ ဥာဏ်ပညာနဲစွာနဲ့
ပြောတိုင်းယုံ စုံလုံးကန်း တွေးဆနိုင်စွမ်းမရှိ ခက်လှပါဘိ။
ကျားငစဉ်းလဲလို့လူတွေက သမုတ်ကြတာ
အဟုတ်မမှတ်ပါ ။ ပုံပြင်ထဲက ဇာတ်လမ်းသာမို့ 
ဪ မိုက်လှပါဘိ ။
(အမြဲတမ်း အနိုင်ရချင်တဲ့ကျားမလေးသို့)
:kiki : at 2/11/2009 03:03:00 PM
Thalassemia သာလာစီးမီးယား ခေါ်သွေးရောဂါတမျိုးအကြောင်း
သွေးထဲမှာ အဓိက ပါဝင်တဲ့သွေးနီဥ (RBC ) ။သွေးဖြူဥ(WBC )။ သွေးခဲခြင်းဆောင်ရွက်တဲ့သွေးမျှင်(platelet) ၃ မျိုးထဲမှမျိုးရိုးဗီဇလိုက်ပြီးအဖြစ်များတဲ့ သွေးနီဥနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါ တမျိုးအကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ် ။
ဒီရောဂါဟာ Electropoiesis ခေါ်တဲ့ သွေးထုတ်လုပ်ခြင်း
ပုံမမှန်လို့ သွေးနီဥထဲမှ ဟေမိုဂလိုဗင် Haemoglobin( Hb ) ဓါတ်လျော့နဲ ပြီး Anaemia သွေးအားနည်းခြင်းကိုဖြစ်စေတာပါ ။Hb မှာ
Hb A1(ပုံမှန် လူတွေမှာသူက 95 -98 % ရှိပါ တယ်)
Hb A2 ( ပုံမှန် 1.5- 3.5 % ရှိတယ်။ဒီထက်ပိုများနေရင် heterogenous beta Thalassemia လို့ပြောလို့ ရပါတယ်)
Hb F (ပုံမှန် <2% style="mso-spacerun:yes"> beta Thalassemia မှာ သူက 90%ထိ များ နေတတ်ပါတယ် )။
Hb C, Hb H နဲ့Hb S ( ပုံမှန်လူတွေမှာ မပါဝင်ပါ)
ဆိုပြီးရှိပါတယ် ။အသေးစိတ်သိလိုရင်တော့Electrophoresis ထပ်လုပ်ပြီး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့Blood for Complete Picture (CP) စစ်လိုက်လို့Hb နဲနေရင် ၊ပြီးတော့ MCV ဟာလဲ ၆၀% ထက်နဲနေရင် Electrophoresis ဆက်စမ်းသပ်မှ Hbရဲ့ 
အမျိုးအစားကို ခွဲခြားနိုင်မှာပါ။ဒါကိုကြည့်မှ ရောဂါ အကြီး ၊ အသေး ခန့် မှန်းလို့ ရမှာပါ။တချို့ လူနာတွေမှာMCV ဟာ ပုံမှန်အရေအတွက်ရှိနေတတ်တယ်
ပုံမှန်လူတွေမှာ Hb အရည်အတွက် ဟာ အမျိုးသားအတွက် 13.6-17.7 g/dl နဲ့ အမျိုးသမီးအတွက် 12.0 -15.0 g/dl ရှိရပါမယ် ။ ဒါမှလဲ သွေးနီဥလေးတွေထဲမှ Hb တွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အောက်စီဂျင်ဓါတ်ကို သွေးလှည့်ပတ်ခြင်းမှတဆင့်လိုတဲ့နေရာမှာ သုံးနိုင်အောင် ပို့ ဆောင်ပေးပြီး ဇီဝကမ္မဖြစ်ပျက်ခြင်းတွေ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာပါ ။
Hb ထဲမှာ ဓါတ် ၂ မျိုးခွဲနိုင်ပါသေးတယ် Haem နဲ့Globin(Protein) တမျိုးပါ။ Haem ထဲမှာ သံဓါတ် (Iron-Fe) တွေရှိပါတယ် ။ များသောအားဖြင့် သွေးအားနည်းရောဂါ မှာ အဲဒီ သံဓါတ်တွေ လျော့နဲ နေတတ်ကြပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အခုပြောမဲ့Thalassemia မှာတော့သွေးနီဥပေါက်ကွဲမှုကြောင့် haem ထဲမှ သံဓါတ်တွေ ဟာ သွေးရည်ကြည်ထဲမှာ ပမာဏများလာရပါတယ် ။ နောက်အကြောင်းတမျိုးက ဒီရောဂါ ရှိသူမှာ မကြာခဏသွေးသွင်းကုသမှုယူနေရတဲ့ အတွက် သွေးနီဥပျက်စီးလို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့သံဓါတ်တွေပေါ့ ။ ဒါကြောင့် ဒီရောဂါရှိတဲ့ သူတွေဟာ သံဓါတ်ပါတဲ့အားဆေးများ ။ အစားအသောက်များ
(ဥပမာ အသည်း၊ နီရဲသော အသား ။ ဝမ်းတွင်းကလီစာ။ ဥ များ )ကို အလွန်အကျွံ မစားဘဲ တတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ရပါတယ် ( သံဓါတ် သိပ်များရင်ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါ Iron Overload ( Hemosiderosis ) ရဲ့ လက္ခဏာ များကိုနောက်ပိုင်းမှာ သီးခြားရေးပြပါမယ်။
ဒီThalassemia ကို အဓိကအားဖြင့်အပြင်းစား ၊ အပျော့စား ၂ မျိုး ခွဲထားပါတယ် ။ Major နဲ့Minor ပေါ့။ ပြီးတော့ တခါ Hb အမျိုးအစားလိုက်ပြီး ဘီတာ သာလာဆီးမီးယား(Beta Thalassemai) နဲ့အယ်လ်ဖါသာလာဆီးမီးယား( Alfa Thalassemia)ဆိုပြီး ခေါ်ကြပါသေးတယ် ။ အကြမ်းဖျင်းပြောရရင် beta က ရောဂါ ပိုပြင်းထန်လို့major ပေါ့ (ဒါက သူ့ ရဲ့မိဘ ၂ဦးစလုံး major ဖြစ်နေရင် ။
ဒါမှမဟုတ် မိဘ တပါးကmajor ,တပါးက minor ။ ဆိုရင် မွေးလာတဲ့ခလေး မှာ major ဖြစ်ဖို့ 
မိဘတဦးတည်းက major ဖြစ်ပြီး နောက်တဦးက ပုံမှန် လူဆိုရင် မွေးလာတဲ့ ခလေး တွေထဲမှာ major ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလန်း တဝက်မှ ၁/၄ ပုံ ထိဘဲ ကျန်ပါတယ် ။ တချို့ တဝက်ဟာလဲ လုံးဝလူကောင်းပကတိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ minor ထဲမှာလဲ alpha thalassemia minor မှာ လုံးဝရောဂါလက္ခဏာ မပြတဲ့type2ဆိုတာရှိပါသေးတယ်
အသေးစိတ်ပြောရရင် နားရှုပ်ကုန်မှာ စိုးလို့ အကြမ်းဖျင်းလောက်ဘဲ ပြောပါမယ်။
နောက်တမျိုးပိုဆိုးတာက alfa, beta ၂ခုလုံးမပါဘဲ gamma chain သာပါတဲ့ Bart’s Hb (မိဘ၂ဦးလုံးမှာတဦးကalfa ချို့ တဲ့ ပြီးနောက်တဦးက beta ချို့ တဲ့ပြီးကလေးမှာ alfa တခုမှမပါလာရင်) ဒီ ကလေး ဟာအတော် ကံဆိုးပါတယ် ။အောက်စီဂျင်ဓါတ်လုံးဝ မသယ်ဆောင်နိုင်လို့ရက်ပိုင်းလောက်ဘဲ
Alpha thalassemia minor ကို မိဘတဦးတည်းဆီကဘဲ အမွေရထားတဲ့သူတွေ တချို့ လဲ ဘာရောဂါလက္ခဏာမှမပြပါဘူး ။ တချို့ လဲ လက္ခဏာ သိပ်မပြင်းထန်လို့ လူ တန်းစေ့အသက်ရှည်နိုင်ကြပါတယ်။
သွေးအားနဲတဲ့ လက္ခဏာတွေကို လူတိုင်းနီးပါးသိကြားဖူးနေကြမှာပါ။
မောတယ် ၊ ရင်တုန်တယ် ၊ နှလုံးခုန်ချက် မမှန်ဘူး ။ ခေါင်းမူးတယ် ၊ အစားအသောက်ပျက်တယ် ၊ အားလျော့ ပြီးလှုပ်ရှားချင်စိတ်မရှိ။ပျော့ခွေနေတယ် ။ဒါက ပုံမှန်တွေ့ နေကျ လက္ခဏာတွေ။
ပိုဆိုးတဲ့ အခါကျရင် အသားဝါမယ် ၊ ဘေလုံးကြီးလာမယ်။ အသည်းကြီးမယ် ခြောက်မယ် ။နှလုံးပွမယ် ။ကြီးမယ်။အရိုးပွပြီး အရိုးကျိုးလွယ်မယ်။ခြေထောက်အနာတွေပေါက်မယ်။သည်းခြေကျောက်တည်မယ် ။
ဒါက ရောဂါရှိနေသူ ခလေးတဦးပုံပါ။ ကြည့် လိုက်ရုံနဲ့ ဒီရောဂါဆိုတာ သိသာထင်ရှားလှ
သွေးသွင်း ကုသခြင်းမှလွဲလို့ထူးထူးထွေထွေ ရွေးချယ်စရာ နည်းလမ်းမရှိပါဘူး
Hb ရှိသင့် တဲ့ပမာဏကို သာမန်လူကောင်းတွေအတိုင်း စံချိန်အပြည့် ထားလို့ တော့မရနိုင်ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့Hb များနိုင်သမျှ များနိူင်ရင် အကောင်းဆုံးပါ ။ အနည်းဆုံး 8 g/dl အထက်မှာဆို ပိုကောင်းတာပေါ့ ။တချို့ က ငါသိပ်မမောသေးဘူး နေလို့ ရသေးတာဘဲဆိုပြီး Hb အတော်လေးနဲ ၊ အတော်လေး မောတော့မှ သွေးသွင်းတော့နှလုံးကလိုအပ်တဲ့အောက်စီဂျင်ရအောင်မနဲဖြစ်ညှစ်အလုပ်လုပ်ရတော့ နှလုံးကြီးခြင်း၊ပွခြင်းများ မြန်မြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီတော့ နှလုံးမထိခိုက်မီကြို တင်ကာကွယ်ဖို့ လိုတယ်လေ။ သွေးသွင်းဖို့ လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ အချိန်မဆွဲသင့်ပါဘူး။ ကြီးပြီးပွနေတဲ့နှလုံးကို ပြန်သေးအောင် ပုံမှန်အလုပ် လုပ်အောင် ပြန်ကုယူလို့မလွယ်ပါဘူး ။
ဘေလုံးကြီးနေတဲ့ခလေးတွေမှာဆိုရင်ဘေလုံးထဲမှာ ရှိတဲ့Microphage ခေါ် ဆဲလ်များက သွေးနီဥ အကောင်းတွေကို ဝါးမြို ဖျက်ဆီးတတ်ကြလို့အဲဒီ ကြီးနေတဲ့ ဘေလုံးကို ဖြတ်ထုတ်ခြင်း ( Splenectomy ) ဖြင့် သွေးနီဥများအချိန်မတိုင်ခင်ပျက်စီးမှုမှ တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်.။ ဒါပေမဲ့ ဒီဘေလုံးထုတ်ထားပြီးသားသူတွေမှာ ကိုယ်ပိုင်ခုခံနိုင်တဲ့ စွမ်းအား ( Immunity ) ကျဆင်းနေတတ်လို့ပြင်ပမှ ကူးစက်ရောဂါများအလွယ်တကူ မဝင်နိုင်အောင် ဂရုစိုက်ရပါမယ် ။
သွေးသွင်းခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်တတ်သောနောက်ဆက်တွဲ ပြသနာများ။
သွေးမတည့် လို့Allergy ဖြစ်တာ ။ Shock ဖြစ်တာတွေက ကြားဖူးနေကျတွေပေါ့ သွေးအုပ်စုခြင်းမတူတာကို သေချာမစစ်ဆေးဘဲ သွေးမှားသွင်းလို့ဒုက္ခရောက်ကြတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ၊ဒါက ပေါ့ ဆမှု ကြောင့်လေ ၊၊ လုံးဝ မဖြစ်သင့်ဘူး ။
တချို့ ကျတော့ သွေးအုပ်စုခြင်းတူပေမဲ့အဲဒီသွေးလှူသူ Donor ရဲ့သွေးထဲမှသွေးဖြူဥထဲမှာပါတဲ့ဓါတ်တချို့ (ဥပမာ miA )့ ကို Recipient လက်ခံသူ မှ မတည့်တာတွေ လည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်သွေးသွင်းဆဲနှင့်သွင်းပြီး ချိန်မှာ ချမ်းတုန်ခြင်း ၊ ဖျားခြင်း၊ ယားယံခြင်းတို့နဲစေရန် Antihistamine ပါတဲ့ထိုးဆေး(ဘာမီတွန် လို ဆေးမျိုး) ကို သွေးမသွင်းမီ ကြိုတင်ပေးကြပါတယ် ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့Washed RBCs( WBC,Platelet ဖယ်ထုတ်ပြီးသားသွေး) ကို ဒါရိုက်သွင်းရရင် ဒီလို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလေးတွေ နဲစေတာပေါ့။ နောက်တခုကောင်းချက် က သွင်းရတဲ့ သွေးရဲ့ ပမာဏ နဲ သွားလို့နှလုံးထဲ အရည်များပြီးကြီးနေတဲ့ လူတွေအတွက် ပိုသင့်တော်ပါတယ် ။
တချို့ တလေလည်း Donor သွေးရည်ကြည်ထဲမှ ပါလာတဲ့ခုခံမှုဓါတ် Antibodyကြောင့်
လက်ခံသူ ရဲ့သွေးနီဥများ ဟာမကြာမီအချိန်ပိုင်းအတွင်းပေါက်ကွဲပျက်စီးရလို့ 
ခေါင်းကိုက်ခြင်း ။ ကြွက်သားများနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊အသက်ရှူကြပ်ခြင်းများဖြစ်တတ်ပြီး ။
ပြင်းထန်ရင်တော့ နာရီပိုင်းအတွင်း shock ရပြီး အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အထိ
ဖြစ်တတ်တယ်။တခါတလေလည်း လှူသူရဲ့ သွေးမှတဆင့်ကူးစက်ရောဂါ များရတတ်ကြတယ်
( လူတွေအကြောက်ဆုံး က AIDS , Hepatitis B & C စသဖြင့်ပေါ့ ။ ဗမာပြည်မှာတော့ ဒီနည်းနဲ့ 
ငှက် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူများ မနဲလှပါဘူး )
နောက်တမျိုးကတော့ မကြာခဏသွေးသွင်းကုသမှုခံယူနေရတဲ့ အတွက် သွေးထဲမှာ သံဓါတ်များလွန်ကဲခြင်း(Iron Overload) ရှိလာရပါတယ် ။အဲဒါကို ဆေးပညာ အရ Hemosiderosis သို့ မဟုတ် Hemochromatosis လို့ ခေါ်ပါတယ်။ တချို့ တလေမှာ သာလာဆီးမီးယားရောဂါလဲမရှိ ၊ မကြာခဏသွေးသွင်းကုသမှုခံယူရခြင်းလဲမရှိဘဲနှင့် တခြားမျိုရိုးဗီဇ ရောဂါတခု အနေနဲ့ ဖြစ်နေရတာပါ ၊
ပုံမှန်လူတဦးရဲ့သွေးထဲမှာ သံဓါတ် (Fe ) 50 – 150 microgm/dl , Normal Serum Ferritin 18 – 300 ng/ml range အတွင်း ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ သာလာဆီးမီးယားရောဂါအပြင် သိုင်းရွိုက်ဂလင်း ပုံမှန်ထက်ပိုတက်ကြွမှု ရောဂါ။ အသည်းအဖုအကြိတ်ရောဂါ ၊ သားငန်ကြိတ် ။ ရင်သား ကင်ဆာ။ လူကီးမီးယား သွေးကင်ဆာ အစရှိ တဲ့ ရောဂါတွေမှာလဲ သံဓါတ်လွန်ကဲ ခြင်းများကိုတွေ့ ရပါတယ် ။ဘယ်လိုကြောင့်ဘဲဖြစ်ဖြစ် သွေးထဲ မှာ သံဓါတ်လွန်ကဲမှု သိပ်များရင် မကောင်းဘူးပေါ့
အသည်းကြွတ်ခြောက်ခြင်း ။ အရေပြားမှာ ကြေးနီရောင် အကွက်ပေါ်ထွက်ခြင်း။ ဆီးချို ဖြစ်ခြင်း။ နှလုံးကြွက်သားထိခိုက်ခြင်း ။ နှလုံးခုန်ချက်မမှန်ခြင်း။ အဆစ်အမြစ် ကိုက်ခဲခြင်း ။ဝမ်းဗိုက် ကြွက်သားအောင့်ခြင် ။ လိင်အင်္ဂါဖွံ့ ဖြိုးမှု ထိခိုက်ပြီး လိင်ဖက်ဆိုင်ရာ ဝေဒနာများခံစားရနိုင်ပါတယ်
သံဓါတ် လွန်ကဲခြင်း အတွက် ကုသမှု။
အရင်တုံးကတော့ သွေးပြန်ကြောထဲမှနေပြီး သွေး 500 Cc ကို တပါတ်တကြိမ် ဖေါက်ထုတ် သံဓါတ် 250 mg ကိုလျော့ နဲ စေတယ်ဆိုကြတယ် ။ ဒါပေမဲ့နဂို ကတည်းမှ သွေးအားနည်းနေသူတွေဆီမှ ဖေါက်ထုတ်နေရမယ်ဆိုရင် ပိုဆိုးတော့မပေါ့။ နောက်ပိုင်းမှာတော့သွေးထဲမှ သံဓါတ်ချပေးတဲ့ထိုးဆေး ၊ သောက်ဆေးများထုတ်လုပ်နိုင်လာကြလို့ဒီသွေးဖေါက်ထုတ်တဲ့ နည်းကို မသုံးကြတော့ပါဘူး ။
ထိုးဆေး Deferoxamine ကို 20- 40 mg/Kg/24 hr နှုံးနဲ့တွက်ချက်ပြီး အရေပြားအောက်သို့ထိုးခြင်း ၊ အကြောဆေးသွင်းခြင်းတို့ ဖြင့်ကုသနိုင်ပါတယ် ။ဒါမှမဟုတ် သောက်ဆေး Desferal , Kelfer(deferiprone)ကို တနေ့500 မှ 1000 mg နှုံးနဲ့ပုံမှန်သောက်သုံးရမှာပါ ။
ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ပြီး ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာ နေထိုင် ဆောင်ရွက်ပေးရင် minor လို အငယ်စား ဒီရောဂါ ခံစားနေရသူများဟာလဲ လူကောင်းပကတိနှင့် မခြား သက်တန်းစေ့ နေနိုင်ကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ် ။
(ရေးစရာ သွေးရောဂါတွေ တပုံကြီးထဲမှာမှ ဘာလို့ဒီသာလာဆီးမီးယားအကြောင်းကိုမှ ရွေးပြီးရေးရတာလဲ ဆိုတာ သက်ဆိုင်သူတွေ ဖတ်ဖြစ်ပြီး မသိဘူး လ်ို့မဖြစ်ရအောင်ပါ ။ မရှင်းလင်းတာ ၊ သိလိုတာရှိရင်လဲ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီးအဆုံးထိဖတ်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် )
:kiki : at 2/10/2009 06:43:00 PM
တချိန်တခါက ရူးရမလောက် စွဲလန်းခဲ့ ဘူးတဲ့ သူတယောက် ။
အဲဒီအချိန်တွေတုန်းက ပြုံးမြမြ မင်းရဲ့ အရိပ် ကြောင့် ၊
ငါ့ ရင်ထဲ စိတ်ထဲ ဦးဏှောက်ထဲ မှာ မိုက်မဲစွာစွဲ လန်း
အချစ်ဆိုတဲ့ဒီအရာကို ဖွဲ့ ဆိုကျူးတဲ့အဓိပ္ပါယ်များစွာတွေမှာ
ရင်ခုန်ခြင်း၊ ချိုမြိန်ခြင်း ၊အေးမြခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း၊ပျော်ရွှင်ခြင်း ၊
ကြေကွဲခြင်း ၊ ပေးဆပ်ခြင်း ၊ရယူခြင်း…ခြင်းပေါင်းများစွာနဲ့ 
ဒင်းအကြောင်းတွေ ဖွဲ့ မကုန်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
တိတ်တိတ်လေးချစ်တာတို့ကြိတ်မှိတ်ပြီးချစ်တာတို့ ၊
ဇွတ်အတင်းချစ်တာတို့ မလွတ်မကင်းချစ်တာတို့ ၊
ကိုယ်မင်းကို ဘယ်ပုံနည်းနဲ့ချစ်ခဲ့ မိတာပါလိမ့်။
ရူးသွပ်စွာချစ်ရခြင်းမှာ ဥပက္ခာပြုတာ ခံခဲ့ရပြီး
ပေးဆပ်ခြင်းနဲ့ ဘဲချစ်ပါရစေလို့ ဟိုတချိန်ကထင်ခဲ့တယ် ။
အပြောကျယ်တဲ့ ချစ်ပင်လယ်ကြောမှာ ပဲ့ မရှိတဲ့ လှေငယ်တစင်းလို
ကိုယ့် ဘဝ စုန်ဆန်မြောခဲ့ ဘူးတာပေါ့။
ခုတော့သိပြီလေ ၊ မကြင်နာရင် ဝေးဝေးနေပါ .ငါ့ဘဝနဲ့ ငါ အေးဆေးစွာနေပါရစေ ၊
မခင်တွယ်ချင်ရင်လဲ နေပါတော့ မင်းနဲ့ ငါဟာ တစိမ်းတွေပါဘဲ ။
ဒါပေမဲ့…. ငါမင်းကို မမုန်းရက်ပါဘူး ။
ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ဆက်ချစ်မှာပါ နောက်နောင်ဘဝပေါင်းများစွာပေါ့ ။
(ခေါင်းစဉ်မရှိသော….. စာတခု ကဗျာတခု ရေးပြီဆိုရင် သူ့ အကြောင်းနဲ့ ဆီလျှော်မဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးတော့ ရှိရမယ်ပေါ့ ။။ ရင်ဘတ်ထဲမှာ ဗလာဖြစ်နေသူယောက် ။ စိတ်ရူးပေါက်ပေါက်နဲ့ ရေးချမိတဲ့ဒီစာပုဒ်လေးခမျာမတော့ ခေါင်းစဉ်မရှိရှာပါဘူး ။ဒါကြောင့် ဒီစာကိုရေးတဲ့ အရူးတယောက်ရဲ့ တာဝန်မဲ့ပေါ့ဆမှုလို့ ဆိုချင်ပါက လဲ ကြိုက်သလိုသာ ပြောကြပါတော့ )
:kiki : at 2/09/2009 09:50:00 PM
ဒီနေ့ တော့ စာရေးရမှာ ပျင်းနေလို့လူလည်ကျလိုက်အုံးမယ် ။ ဒီနေ့ လည် မှာ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် ၊ဆရာမလေးတယောက်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်သွားတုံးက ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေထဲက ဗရုတ်ကျနေတဲ့ ပုံတချိုကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။။ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ တော့ သိပ်ကိုက်ညီမှာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီကလူတွေအနေနဲ့ ကတော့ဘာမှမထူးဆန်းလှပါဘူး။ သတို့ သား၊သတို့ သမီးကို ရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေက မင်္ဂလာဆောင် နဲ့ ဧည့်ခံပွဲတွေမှာ ဒီလိုဘဲ အကျပ်ကိုင်ပြီး လူပရိတ်သတ်လည်ပုံမှာ ပေါက်ကရတွေလုပ်ခိုင်းတတ်ကြပါတယ် ။။( ဒီမှာ ဂဲဖိုးတောင်းတဲ့ထုံးစံတော့မရှိပါဘူး )
ပွဲစ တာနဲ့ ကိုယ်တို့ ရဲ့ သူဌေး ငပေါ က သတို့ သား ၊သတို့ သမီးအတွက် လက်ဆောင်တေးတပုဒ်ဆိုတယ် ( အမှန်ကတော့ သူကိုယ်တိုင် က ဖိုးဆိုချင် လေ ။ အလုပ်မှာ ဘာပွဲလုပ်လုပ် သူသီချင်းမဆိုရ မနေနိုင်ဘူး ) ။Forever Love လို့အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့တရုပ်သီချင်းပေါ့)။
ပြီးတော့မှ နောက်ဆက်တွဲ ပေါက်ကရလုပ်ကြပါတယ် ။
မိန်းမကို ချစ်ရဲ့ လား မေးတော့ သတို့ သားက ချစ်ပါတယ် ဖြေတာ ...အသံတိုးလို့အားလုံးကြားအောင် .ချစ်ပါတယ် ၃ခါ တိတိ အကျယ်ကြီးအော်ပြောရတယ်။
သတို့သားကိုစင်မြင့် ပေါ်တက်ခိုင်းပြီး လင့်ဝတ္တရား ၁၀ ချက်(ဗမာ ထုံးစံမှာတော့ လင့်ဝတ္တရား ၅ ပါးထဲပါ ။ခုတော့ သူတို့ ဟာသူတို့ ပေါက်ကရ လေးဆယ် ၊ ရှစ်ဆယ်တွေ လျှောက်ရေးထားပြီး မိန်းမ မနိုးခင် အရင်ထ ၊စားသောက်ဖို့ ပြင်ဆင်ပေး ။အလုပ်အပြန် မိန်းမပင်ပန်းရင် ပြုစုရမဲ့ အချက်တွေရော ။ မိန်းမအိပ်ချင်ရင် မနှောက်ယှက်ဖို့ ရော ။ရတဲ့ လခ မိန်းမ မသိအောင်ဒိုင်မလျှိုထားဖို့ ရော ။နောက်မယားငယ်ယူရင် ပြင်းထန်စွာအရေးယူမည့်အကြောင်းရော ..။ ကလေးမွေးရင်လဲ ကလေးဝေယျာဝိစ္စအတူတူလုပ်ရမဲ့ အကြောင်းရော ..အင်းတချို့ အချက်တွေ မမှတ်မိတော့ပါ ။ အားလုံး ပေါင်း ယောင်္ကျားလိုက်နာရမဲ့စည်းမျဉ်း ၁၀ ချက် ကို မိန်းမရှေ့ မှာ ဒူးထောက်ထိုင် ဖတ်ပြရပြီး အဲဒီ စာချုပ်စာရွက် (ဆရာမတယောက် ဘယ်အချိန်ကတည်းက သေချာ ရေးပြီး အကျအန ပုံနှိပ်ထားတဲ့စာရွက် ) အပေါ်မှာ သတို့ သားကို လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီး အလုပ်က မီးခံသေတ္တာထဲမှာ သိမ်းထားမယ်ပြောတယ်..စည်းကမ်းဖေါက်ရင်စာချုပ်အရအရေးယူမယ်တဲ့၊။မလွယ်ပါ့လား ။။
နောက်တခါ သတို့ သမီး အလုပ်မှာစီးတဲ့ဖိနပ်တရံလဲ ဘယ်အချိန်က ပါလာသလဲ မသိ ။အဲဒီအထဲ ဝိုင်အရက် ထဲ့ ပြီး သူတို့ ၂ဦး လက်ချင်းယှက်စေပြီး၊ ပရိသတ်ရှေ့ မှာ အတင်းသောက်ပြခိုင်းပါတယ် ။
မချစ်သော်လည်းအောင့်ကာနမ်း ။ အဲသလိုဘဲ ရွံ လို့မသောက်ချင်လဲ မရဘူး ။အောင့်ဧည်းပြီး သောက်ရတာဘဲ ။ အဟဲ မသောက်ရင် ညစာ ငတ်မယ်လေ ။ပြောထားပြီးသား တဲ့။
ရွံစရာ ဝိုင်အရက်သောက်ပြပြီးလို့ပြီးပြီ မထင်နဲ့ အုံး ။ ၂ယောက်သားကို လူရှေ့ သူရှေ့မလုပ်မနေရ တဲ့ 
KISS စက္ကန့်၆၀ ၊ တမိနစ်ပေါ့ ။ ၂ယောက်သား ၂ဖက်မိဘရှေ့ မှာ မျက်နှာနီ နေတာ လဲ မရဘူး တစက္ကန့် လောက်ဘဲ kiss တော့မရဘူး ။ အစကပြန်စတဲ့ လေ ။စက္ကန့်၆၀ တိတိမှ ဘဲ လွတ်ငြိမ်းခွင့် ရတော့တယ်.
ဒါနဲ့ တင်မပြီးသေးပါ ။ မင်္ဂလာဦး ဇနီးမောင်နှံ စိတ်ညစ်စရာ နောက်တမျိုးလာသေးတယ် ။ ထုံးစံအတိုင်း လူတွေ စားနေတုံး သတို့ သားနဲ့သတို့ သမီးတို့အရက်ခွက်ပေါက်စလေးကိုယ်စီနဲ့လာတဲ့ ပရိသတ်ကို ဝိုင်းတိုင်းလိုက်နှုတ်ဆက်ရတယ်လေ ။။ ကိုယ်တို့ ဝိုင်းကို နှုတ်ဆက်ဖို့ အလှည့် ရောက်တော့.....
ဒီဘဲတော့ ဒီည ဝမ်းမလျှောရင် လယ်ပင်းအဖြတ်ခံမယ်( အဟဲ သူ့ လယ်ပင်းကိုပြောတာနော်)။ဒီတခါတော့ အရက်ရိုးရိုးတင်မကတော့ဘူး ။ ဟင်းထဲက ငြုတ်အချဉ်ရေ ။ဆေးပေါင်းကြက်စွပ် ။wasami။ငြုတ်ကောင်းမှုံ့အစုံရောထားတဲ့cocktail တခွက် ၊ ဖိနပ်စုတ်ကြီးထဲထည့်ကာ ၊ရှုံ့ မဲ့ ပြီး သောက်ရပါ၏။ သနားစရာ သတို့ သားပါ တကား။ မနက်ဖန်မနက် Newzeland Honeymoon ခရီး ထွက်လို့ မှ ရပါ့ မလားလို့သူ့ အတွက် စိတ်ပူနေမိသေးတယ် ...
ဒါကြောင့်တခု အသိပေးပါရစေ .. နောက်နောင်များ စိတ်ကူးမှားပြီး မင်္ဂလာဆောင်ကြမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ ဗမာပြည်မှာဘဲ အေးအေးဆေးဆေး ဆောင်ကြပါ ။ ဒီအရပ် ဒီဒေသ ကို ယောင်လို့ တောင် ခြေဦးမလှည့် ကြပါနဲ့လို့ကြိုတင် သတိပေးအပ်ပါသည် ။
နောက်ထပ်တခြားပုံတွေကိုတော့ ပေရှည်နေမှာစိုး၍ ဆင်ဆာဖြတ်ထားခဲ့ ပါသည် ။။
:kiki : at 2/08/2009 05:47:00 PM